သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> ဂဟေထားသည့်ပစ္စည်း -> အပူချိန်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဂဟေဘူတာ
XYTRONIC INDUSTRIES LTD. အထူးပြုဖြစ်ပါတယ် အပူချိန်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဂဟေဘူတာ ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း။ Excellent ကအရည်အသွေး, အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု, အလုပ်အကိုင်နှင့်ရိုးသားမှုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များအနေဖြင့်ရရှိခဲ့သည်အပြုသဘောဆောင်သော feedbacks ဖြစ်ကြ၏။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များအလုံးစုံတို့အဘို့စျေးကွက်အတွက်အပြုသဘောပုံရိပ်တွေများရောနှောကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနှင့်သူတို့သည်ငါတို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း clients များ၏လူအပေါင်းတို့အားကျွန်ုပ်တို့ကတိတော်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ကအမြင့်မားဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူဖောက်သည်များပေးသင်နှင့်အတူအောင်မြင်မှုအသီးအပွဝေမျှဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enable မှအသံအနေအထားဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှပိုကောင်းတဲ့ပေးသွင်းနှင့်သင်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတိုးတက်လာသောမိတ်ဖက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်မည်သို့သင့်ရဲ့အကြံပြုချက်နှင့်အတွေးအခေါ်များကြိုဆိုပါတယ်။ 100% အရည်အသွေးမြင့်စစ်ဆေးခြင်းဖောက်သည်အဆုံးမှကယ်နှုတ်တော်မူ၏သောအခါကုန်ပစ္စည်းများအရည်အသွေးမြင့်မားစံဖြစ်ကြ၏သေချာအောင်ဖျော်ဖြေကြလိမ့်မည်။
မတူညီတဲ့ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်မြှင့်အတူ။ သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရ, စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်သင့်ရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုဖြည့်ဆည်းပေးလိမ့်မည်။ ရုံငါတို့သည်သင်တို့အကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်ပေးမည်ကျွန်တော်တို့ကိုသင်တို့အလိုပြောပြပါ။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် 100W ဂဟေဘူတာ
1. အိပ်စက်ခြင်း function ကို, အော်တို shutdown ချ function ကို, စင်တီဂရိတ် / ဖာရင်ဟိုက် function ကို။
သူတို့ပြုသောအမှုအနေအထားကို၏အိပ်စက်ခြင်း function ကိုဂဟေသံကအလိုအလျှောက်ထောက်လှမ်းကိုအိပ်စက်ခြင်းအချိန်တင်ထားရန်ရောက်ရှိလာတစ် quiescent ပြည်နယ်အတွက်သုံးစွဲနေကြသည်မဟုတ်, သံ၏အပူချိန်ကိုအလိုအလျောက် 150 °မှအပူချိန်ကိုလျှော့ချအိပ်စက်ခြင်းပြည်နယ်ထဲသို့မဝင်ရ C, ထိထိရောက်ရောက်၏ဓာတ်ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ပါတယ် သံကဦးခေါင်းနှင့်သံပျဉ်းဝန်ဆောင်မှုအသက်, စွမ်းအင်ချွေတာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတာရှည်။ သင်ဂဟေသံကအိပ်ပျော်ခြင်းမလိုအပ်ပါလျှင်, အိပ်ပျော်ခြင်းအချိန်0င်ရန်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
သံကအိပ်ပျော်ခြင်းပြည်နယ်ထဲသို့မဝင်ရ soldering ပြီးနောက်မှာ Automatic Shutdown လုပ်ချိန်တွင် function ကို, အတွတ် timer အစီအစဉ်စတင်က, shutdown ချအချိန်အိပ်စက်ခြင်း, အော်တို shutdown ချ, စွမ်းအင်ချွေတာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကနေလန့်နိုးဘဲထားကြ၏။
အပူချိန် display ကို mode ကို၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသစျေးကွက်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဒီဇိုင်း 2. စင်တီဂရိတ် / ဖာရင်ဟိုက်အပူချိန် display ကို function ကို။
အသစ်အသွင်အပြင်ဒီဇိုင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူ 3. ။
4. သက်သာခရီးဆောင်လက်ကိုင်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် LED display ကို။
ရှည်လျားဝန်ဆောင်မှုအသက်ဘို့ 5. အရည်အသွေးမြင့်ခုခံကောင်း